အနုပညာအိမ်လေး: တိုင်းပြည်အတွက် လူထုတစ်ဦး ဆုံးရှုံးပြီ
“လူထု” ဆိုရင် မသိသူ မရှိ။ စာပေ၊ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ကောင်းကျိုး ရွက်ဆောင်သယ်ပိုးပေးခဲ့သည့် သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း အသက် (၇၁)နှစ်သည် ၁၇.၆.၂ဝ၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့) ည (၁၁း၃ဝ) နာရီအချိန်တွင် ရင်ကြပ်ဝေဒနာဖြင့် SSC ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ ၁၈.၆.၂ဝ၁၂ (တနင်္လာနေ့) နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် SSC ဆေးရုံမှ ရေဝေးသုဿန်အအေးခန်းသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ကူညီဖေးမ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ဈာပနအခမ်းအနားအား ၁၉.၆.၂ဝ၁၂ (အင်္ဂါနေ့) မွန်းလွဲ (၁းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်ရှိ ခန်းမဆောင် (၁/ခ)၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် လူထုဦးစိန်ဝင်း အား ခင်မင်လေးစားကြသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများအားလုံးအတွက် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ (မွန်းလွဲ (၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် မီးသင်္ဂြိုလ်ပါမည်။)
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့လာသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ စေတနာရှင် များအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်
phung bellaJune 19, 2012 at 6:24 AMhi beautiful blog. We haveabig classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blogReplyDeleteAdd commentLoad more...